Koonfur Galbeed oo ka digtay in la siyaasadeeyo abaaraha ka jira deegaanadeeda | Baydhabo Online
Koonfur Galbeed oo ka digtay in la siyaasadeeyo abaaraha ka jira deegaanadeeda
Maamulka Koonfur Galbeed, ayaa waxaa uu ka digay in la siyaasadeeyo abaaraha daran, ee xilligan ka jira Deegaanada Koonfur Galbeed, iyadoo sidoo kalana uu Maamulku uu ka digay in shakhsiyaad gaar ihi ka faa’iideystaan baahida dadka ay abaaruhu saameeyeen.
Wasiirka Hub Ka Dhigista & Dhaqancelinta Maamulka Koonfur Galbeed, Xasan Xuseen Maxamed (Xasan Eelaay), Gudoomiyaha Gobolka Baay, C/rashiid Cali C/laahi, Taliyaha Booliska Gobolka Baay, Korneyl Mahad C/raxmaan Aadan iyo Taliyaha Hay’adda Nabad Suggida Magaalada Baydhabo, Maxamed Isaaq Ibraahim (Aflow), oo shir jaraa’id ku wada qabtay Magaalada Baydhabo, ayay kaga diggeen arrintaasi.
Wasiirka, ayaa sheegay in Maamulka Koonfur Galbeed uu soo dhaweynayo cid kasta oo gacan u fidineysa dadka ay abaaruhu saameeyeen, iyadoona looga baahan yahay in arrintaasi kala shaqeeyan guddiga abaaraha Koonfur Galbeed.
“Waxaan soo dhaweynaynaa cid kasta oo ka qayb qaadanaysa abaaraha ka jira Deegaanada Koonfur Galbeed. Waxaana jira guddi ka shaqeeya abaaraha, guddigaasi ayaana loo baahan yahay in lagala shaqeeyo.” Ayuu yiri Wasiirku.
Wasiirka, ayaa intaa ku daray “Waxaan ka digeynaa in la siyaasadeeyo abaaraha ka jira Koonfur Galbeed. Waxaan leenahay dadka ay dhibaatadu hayso yaan laga faa’iideysan. Waxaa jira dad si gaar ah isu abaabulay oo leh abaarta ayaan ka shaqaynaynaa. Dadkaasi waxaan leenahay haddii aad shacabka wax u qabanaysaan la shaqeeya guddiga abaaraha.”
Taliyaha Booliska Gobolka Baay, Korneyl Mahad C/raxmaan Aadan, ayaa hadalka Wasiirka ku xoojiyay in lagama maarmaan ay tahay in guddiga abaaraha lagala shaqeeyo, sidii dadka loo gaarsiin lahaa gurmadka saxda ah, ee ay u baahan yihiin.
Gudoomiyaha Gobolka Baay, C/rashiid Cali C/laahi, ayaa isaguna sheegay in maanta abaaro darani ay ka jiraan Deegaanada Koonfur Galbeed, dadkuna ay u baahan yihiin in gargaar lala soo gaaro